ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ (၁ဝ၃) နှစ်မြောက်မွေးနေ့ အဖြစ် သံဃာအပါး ၁ဝဝဝ အား အရုဏ်ဆွမ်းကပ်လှူ၍ နိဗ္ဗ? - Yangon Media Group
မကွေး၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၆
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး အောင်လံမြို့တွင် ဖေဖော်ဝါရီ ၁၃ ရက်၌ ကျရောက်မည့် မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေးဗိသုကာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ (၁ဝ၃) နှစ် မြောက် မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် သံဃာအပါး ၁ဝဝဝ အရုဏ်ဆွမ်း ကပ်လှူခြင်း၊ ရိုးရာမုန့်မျိုးစုံ အမျိုး ပေါင်း ၆ဝ ပါဝင်သော နိဗ္ဗာန်ဈေးပွဲတော်နှင့် စာပေပွဲများကို ကျင်းပ သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ကျင်းပရေး ကော်မတီထံမှ သိရသည်။
”ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ (၁ဝ၃) နှစ်မြောက်မွေးနေ့မှာ အောင်ဆန်း စိတ်ဓာတ်ရှင်သန်ရေး အစီအစဉ်အနေနဲ့ နိဗ္ဗာန်ဈေး၊ ကာတွန်းပြပွဲ၊ စာအုပ်ဈေး၊ ကဗျာရွတ်ပွဲနဲ့ စာပေ ဟောပြောပွဲကို စည်ကားစွာကျင်းပမှာ ဖြစ်ပါတယ်” ဟု အောင်လံမြို့ ဗိုလ်ချုပ်မွေးနေ့ကျင်းပရေး ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးက ပြောသည်။ ဗိုလ်ချုပ် (၁ဝ၃) နှစ်မြောက် မွေးနေ့ကို အောင်လံမြို့ ကန်ကြီးရပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြေးရုပ်နှင့် လွတ်လပ်ရေးကျောက်တိုင်ကွင်း၌ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၃ ရက် နံနက် ၅ နာရီတွင် သံဃာအပါးတစ်ထောင်ကို အရုဏ်ဆွမ်းလောင်းလှူခြင်း၊ ကာတွန်းပြပွဲနှင့် စာအုပ်ဈေးများ ခင်းကျင်းပြသမည်ဖြစ်ကာ
ညနေ ၃ နာရီတွင် မြန်မာ့ရိုးရာမုန့်မျိုးစုံ အ မျိုးပေါင်း ၆ဝ ပါဝင်သော နိဗ္ဗာန် ဈေးပွဲတော်နှင့် ညနေ ၆ နာရီတွင် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ၏ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဂုဏ်ပြုကဗျာ ရွတ်ပွဲကျင်းပပြီး ည ၇ နာရီတွင် စာရေးဆရာနေဝင်းမြင့်နှင့် ဆရာညီပုလေးတို့က စာပေဟောပြောမည်ဖြစ်သည်။ အောင်လံမြို့ ဗိုလ်ချုပ်အောင် ဆန်း (၁ဝ၃) နှစ်မြောက် မွေးနေ့အ စီအစဉ်များ ကျင်းပနိုင်ရေးအ တွက် မြို့ခံပြည်သူများက အလှူငွေများထည့်ဝင်ကာ စုပေါင်းကျင်းပ ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ယခုနှစ် မန္တလေးသင်္ကြန်ပွဲတော်တွင် လမ်းလျှောက်သင်္ကြန် ဧရိယာကို ကျုံးအရှေ့ဘက်၌ တိုးချဲ့သတ်မှတ?
ချင်းတွင်းမြစ်နှင့် ဧရာဝတီမြစ်ဆုံသည့်နေရာများ၌ ကမ်းပါးပြိုမှုများဖြစ်ပွား၊ အိမ်ခြေ ၂ဝဝေ??